सेनाका मान्छे धमाधम बालिका बलात्कार काण्डमा लिप्त,यी हुन् नेपालमा पुरुष र विदेश पुगे पछी महिला हुने - हाम्रो ईकोनोमी
सेनाका मान्छे धमाधम बालिका बलात्कार काण्डमा लिप्त,यी हुन् नेपालमा पुरुष र विदेश पुगे पछी महिला हुने
दुई महिना नबित्दै फेरि अर्का सैनिक प्रहरी खोरमा पुगेका छन् निलम्बित मेजर प्रभवविक्रम शाहकै शैलीमा आठ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती गर्न खोज्दा । बागबजारस्थित भर्खरै अवकाशप्राप्त तीनतारे जर्नेल बलदेव राजमहतको घर रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुद्दा ज्ञानबहादुर गुरुङको हो यसरी मति बिग्रिएको । श्रीमती र एक छोरी साथैमा रहेका नुवाकोटे गुरुङले सोही घरमा डेरा गरी बस्ने आठ वर्षे बालिकामाथि गिद्धेनजर लगाएका थिए । १२ गते शनिबार बालिकाको स्कुल बिदा, उनी दाउ हेरेर बसिरहेका थिए ।
अपराह्न तीन बजेतिर आमा धारामा पानी थाप्न गएको मौका छोपेर सुटुक्क कोठामा छिरे । बच्चीलाई मिठाई दिए, म्वाइँ खाँदै काखमा राखे र चलाउन थाले । सोही समय बालिकाकी आमा कोठामा प्रवेश गर्दै गर्दा हर्कत छरपष्ट भयो । होहल्ला गरिन्, पतिलाई कोठामा बोलाइन् । गुरुङ त्यहाँबाट भागिसकेका थिए । आँखैअगाडि नाबालिका छोरीको शरीर कुनै व्यक्तिले चलाइरहेको देख्यो भने अभिभावकको हालत कस्तो होला ? यो घटनाका कारण विक्षिप्त परिवार न्याय खोज्दै सिंहदरबार प्रहरी प्रभाग पुग्यो र उजुरी लेखायो । अस्ति १४ गते जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत हुद्दा सिंहनाथ गणसम्बद्ध ज्ञानबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ज भएको छ ।
ती बालिकाले यसअघि पनि पटक–पटक सताइने गरेको बयान दिएकी छन् । यद्यपि, ज्ञानबहादुरले यो तथ्य स्विकारेका छैनन् । सैनिक प्रहरीका अनुसार पोलिग्राफ रिपोर्ट आउन बाँकी छ । तीन दिनका लागि हिरासतमा राखिएकोमा ज्ञानबहादुरको म्याद १० दिन थपेर घटनाको अनुसन्धान हुँदै गरेको छ । सेनाका बर्दीधारी नै बालिका बलात्कार काण्डमा मुछिएको यो पहिलो घटना भने होइन । दुई महिनाअघि पुस १४ गते बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना मेजर पक्राउ परिसकेका छन् । बागलुङको २३ नम्बर बाहिनीमा कार्यरत प्रभवविक्रम शाह यस्तै अवस्थामा बुद्धनगरस्थित आफन्तको घरमा भेटिएका थिए । यस्तै, गोरखा घ्याल्चोक–९ मा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्का सैनिक महेन्द्र श्रेष्ठ पनि हिरासतमै छन् ।
विदेश पुगेर महिला बनेपछि…
१० लाख रुपैयाँले काठमाडौंको पाखाभित्तामा चारआना जग्गा किन्न सकिन्छ । त्यति नै रुपैयाँ खर्चंदा एउटा टहरा बन्न सक्छ । पैसा चिन्नेले यो रकम खेलाएर राम्रै आयआर्जन गर्न सक्छन् । तर, सन्ध्या लामाले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर गत साउन २४ गते लिंग परिवर्तन गरेकी छन् ।
उनले थाइल्याण्डको बैंककमा पुरुष अंग हटाएर महिला यौनांग प्रत्यारोपण गरेकी हुन् । झण्डै ६ घण्टा लगाएर अंग प्रत्यारोपणपछि पूर्णरूपमा महिला बनेकी छन् । ‘महिला यौनांग प्रत्यारोपण गर्ने पहिल्यैदेखिको इच्छा थियो,’ सहयात्री समाज वीरगञ्जकी कार्यक्रम संयोजक उनले सुनाइन्, ‘आर्थिक अभावले बल्लतल्ल रहर पूरा गर्न सम्भव भयो । लिंग परिवर्तनपछि असाध्यै खुशी छु ।’
जन्मँदा पुरुष भए पनि बिस्तारै महिलाको स्वभाव देखिन थालेको बताउने उनी शारीरिक अंगसमेत महिलाको भएकोमा दंग छिन् । घरपरिवारको सल्लाहमै लिंग परिवर्तन गर्न एक्लै थाइल्याण्ड पुग्दा चिकित्सकले विनासंरक्षक शल्यक्रिया नगर्ने भनेपछि इटालियन र कम्बोडियन साथीलाई साक्षी राखेर लिंग परिवर्तन गराएकी हुन् । लिंग परिवर्तन गरे पनि बच्चा जन्माउन सक्दिनन् किनकि पाठेघर छैन । पाठेघर नभएपछि सन्तानसुखको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तैपनि खुशी व्यक्त गरिन्, ‘पाठेघर प्रत्यारोपण गर्ने सोच बनाएकी छु । अमेरिकामा पाठेघर प्रत्यारोण गरेर सन्तान जन्माउनेहरूको समाचार पढेकी थिएँ । म पनि ढिलोचाँडो यो काम गर्नेछु ।’ त्यसो भएपछि सन्तानसुख नहुँदा वैवाहिक जीवन कस्तो होला भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन । उनी विदेशी नागरिकसँग प्रेममा छिन् ।
लिंग परिवर्तनपछि ‘एनल’ र ‘ओरल सेक्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको उनले बताइन् । झण्डै दश वर्षदेखि तेस्रोलिंगीका रूपमा परिचित उनको भनाइ छ, ‘अब पुरुष र महिलाले जस्तै सेक्सुअल रिलेसनसिप राख्न सकिन्छ ।’
हेटौंडा मकवानपुरनिवासी उनले झण्डै ६ वर्षअघि दुई लाख खर्चेर महिलाको झैं स्तन विकास गरेकी थिइन् । नागरिकतामा सञ्जीव लामा उल्लेख रहेकी उनी महिलाकै रूपमा नागरिकता निकाल्ने प्रयासमा छिन् । विश्व बैंकले सन् २००८ मा गरेको तेस्रोलिंगी सौन्दर्य प्रतियोगितामा ‘मिस व्युटी एण्ड ब्रेन’ को ताज पहिरिएकी उनले भोजपुरी चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् भने अवसर पाए नेपाली चलचित्र खेल्ने रहर भएको बताएको जन आस्थाले उल्लेख गरेको छ ।
रहरैरहरले भरिपूर्ण मानवजीवनमा एउटा पूरा गरेपछि अर्को रहर लाग्नु अस्वाभाविक होइन । लामाले स्तनको शल्यक्रिया गरेको ६ वर्षपछि लिंग परिवर्तन गरिन् । अबको रहर के होला ? भनिन्, ‘पाठेघर प्रत्यारोपण गर्ने योजना बनाएकी छु । त्यतिमात्रै होइन, पुरुषको स्वर परिवर्तन गरी महिलाको जस्तै बनाउन घाँटीको शल्यक्रिया गर्ने रहर छ । त्यो पनि पूरा गरेरै छाड्नेछु ।’